ကျွန်တော် နှင့် အင်တာနက်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Think Different » ကျွန်တော် နှင့် အင်တာနက်…	19
ကျွန်တော် နှင့် အင်တာနက်…
Posted by Yae Myae Tha Ninn on May 11, 2016 in Think Different | 19 comments
-မနေ့က ကျွန်တော့်ခယ်မကို သူ့အဖေ ကျွန်တော့် ယောက္ခထီးက မေးတယ်… ” နင်တို့ ဖေ့ဘွတ်သုံးတာ ဘာကောင်းလဲတဲ့…???”
-ကျွန်တော် ဖြေလိုက်ချင်ပါတယ်… သို့ပေမဲ့ ကိုယ်ပြောလို့ ဖောင်းသွားရင် မကောင်းဘူးလေ…
-ဖေ့ဘွတ်အကြောင်းမပြောခင်.. ထုံးစံအတိုင်း လေနည်းနည်းလေး ရှည်ပါရစေဗျာ…
-အင်တာနက် နဲ့ ကျွန်တော် စတွေ့ပုံလေးကိုပါ…
-၂၀၀၂ ဧပရယ်လောက်မှာ အင်တာနက်ကို စတွေ့ဖူးခဲ့တယ်ဗျ… အဲတုန်းက မြန်မာပြည်က ရပြီလား မရသေးလားတော့ မသိဘူး…
-တွေ့ပုံက ကျွန်တော် Forever Group ကို ကွန်ပျူ တာ သင်ဖို့ အလုပ်သင်သဘောပေါ့ နဲ့ အဲလမှာ စရောက်တာကိုး…
-ရလဲ သေချာတယ် မတွင်ကျယ်သေးဘူး… IBM ခေါ် PC တကိုယ်ရည်သုံးကွန်ပျူ တာ တွေကို ဆင်ပေးတော့ ဖုန်းပေါက် Modem ပေါက် ဝေးစွ Network ပေါက် RJ45 ပေါက်တောင် မထည့်ပေးရဘူး… အရင်က အခုလို တခါတည်း Motherboard မှာ မပါဘူးဗျ သပ်သပ်ထည့်ပေးရတော့ … အသုံးမတည့်ဘူးဆို ငွေကုန်လို့ မထည့်ကြဘူး…
-ဘာလို့ မထည့်လဲ ဆိုတော့… ၂၀၀၂ က ကွန်ပျူ တာ တလုံး ဆင်တာပဲ တသောင်းခွဲရတယ်… ကွန်ပျူ တာဈေးဆို တွေးသာ ကြည့်ပေတော့… အဲကြောင့် အဲခေတ်က ၀ယ်ထားတဲ့ လူကြီးတွေ မပစ်နိုင်ကြဘူး… ပြင်ပြင်ပြီး ပြန်ကို သုံးတာ… ဒါက စကားချပ်…
-ဒါဆို ကျွန်တော်အင်တာနက်ကို ဘယ်လိုသုံးလဲ… FG က ကွန်ပျူ တာတွေက Apple ပန်းသီးတံဆိပ် iMac တွေလေ… သူတို့က တခါတည်း Compact ခေါ်မယ်… အတွဲလိုက်ပါတယ်… မလိုချင်လို့ ဖြုတ်ထားပေးပါပြောမရဘူး… ၀ယ်ရင် အကုန် ပါတာပဲ… အဲမှာ Modem ပေါက် ဖုန်းပေါက်တခါတည်းပါတယ်… အဲသဟာမှာ လိုင်းဖုန်းကိုထိုးပြီး ဘောပွဲသတင်းတွေ ကြည့်တာဗျ…. စီနီယာတွေ ကြည့်တာ ပြောပါတယ်… ကျွန်တော်က ပညာသင်ကိုး…
-၂၀၀၄ မှာကျတော့ ကျွန်တော် တက္ကသိုလ် ဒုတိယနှစ်လောက် … ဒဂုံစင်တာလဲ ဖွင့်ပြီး… Promotion လုပ်တဲ့ ပွဲတခုမှာ… စတွေ့တာက mail4U ဆိုပြီး ကမ္ဘာဦးခေတ်က လူရိုင်းပုံနဲ့ E Mail ဆိုတာကို စပြီး မိတ်ဆက်ပေးတာနဲ့ ရင်းနှီးခဲ့တယ်…
-လစဉ်ကြေး နှစ်စဉ်ကြေးတွေနဲ့ပေါ့…. မ၀ယ်ခဲ့ပါဘူး… ဟီး….
-အဲတုန်းက ထင်တာ သူဌေးတွေ၊ နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ ဆက်ဆံရတဲ့ သူတွေပဲ သုံးရတာ ထင်တာကိုး… ဒါနဲ့ပဲ အဆက်ပြတ်သွားလိုက်တာ… …. …
-၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ ကျောင်းပြီးလို့ ဆော့ဝဲလ် ကုမ္ပဏီတခုမှာ ၀င်လုပ်ပါတယ်… အဲ့က သူငယ်ချင်းတယောက်က လူတယောက်ကို မေးလ်အကောင့်တခုတော့ ရှိသင့်တယ်ဆိုတာနဲ့ပဲ တစခန်း ပြန်ထ လာရတယ်…
-ဟာ… ပိုက်ဆံပေးရတယ်… သုံးလဲ မသုံးတတ်ဘူး ငြင်းတော့… ဖရီးတဲ့… စိတ်ဝင်စားသွားတယ်…. ပြီးတော့ အဲဒါနဲ့ နိုင်ငံခြားက လူတွေနဲ့ အင်္ဂလိပ်လို ပြောကျင့်ရတော့မယ်ပေါ့…
-စလုပ်တော့… ရှေ့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ နာမည် ပြီးရင် @sailormoon.com ဆိုပြီး အီးမေးလ်အကောင့်တခုရတယ်… ဟားဟား… အဲတုန်းးကဆို ငါတော့ လူရာဝင်ပြီဆို ပြီး ပျော်သွားလိုက်တာဗျာ…
-တကယ်တော့ လိုချင်တာပေါ့… ပိုက်ပိုက်ပေးရမယ်ဆိုလို့သာလေ… -ဒါနဲ့ နည်းနည်းကြာလာတော့ ထပ်လာတယ်… ဂျီမေးလ်တဲ့… ဂျီလ်မေးလ်နော်… ဂူဂယ် ဟုတ်သေးဘူး… အဲအဆင့်မရောက်သေးဘူး… အခုကျတော့ ဂူဂယ်ကနေမှ ဂျီမေးလ်ကိုသိတာနော်… မတူဘူး….
-လိုလို့လား… တခုရှိတာပဲ တော်ပြီဆိုတော့… မဟုတ်ဘူး… ဒါက လူသုံးများတယ်တဲ့…. လူသုံးများတယ်တဲ့…. ကျွန်တော်နားမလည်သေးဘူး…
-များတော့ ဘာဖြစ်လဲ… သူမပြောဘူး… သူ့အကောင့်ကို ဖွင့်ပြီး တဂျောက်ဂျောက်နဲ့ ဘာတွေ ရိုက်နေမှန်းမသိဘူး…
-ပြီးမှ အဲလို ရိုက်လို့ရတယ်တဲ့… ဗျာာာာာ… နားကိုမလည်နိုင်တာ… အဲလို တဖက်ကကိုယ့်ကို ပြန် ရိုက်ဖို့ သူငယ်ချင်းမရှိဘူးလေဗျာလို့… ပြီးတော့ အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ရိုက်တော့ အီးလဲ အဲလောက်မကောင်းဘူးလို့ ငြင်းသေးတယ်…
-မင်း လျှာမရှည်နဲ့ နာမည်ရွေးတဲ့… ဟင်င်င်… နာမည်က ဒီနာမည်ပဲလေ… ဟုတ်ဘူးတဲ့… နာမည်လှလှ အမေအဖေ မပေးတဲ့ နာမည်တဲ့… အော်… စာရေးဆရာတွေလို ကလောင်လားပေါ့… အေးးးးး ဆိုတာနဲ့… ဟဲ.. တခုပေးလိုက်တယ်…
-နောက်မှ နာမည်တူတာတွေ မတူတာတွေ သိလာတယ်… ဂျီမေးလ်မှာက နာမည် ၏သည်မရွေးတူရင် မရဘူးလေ….
-ဒါနဲ့ စသုံးပြီလား ဆိုတော့…. ဟင့်အင်း…. လူလဲမရှိ(သူငယ်ချင်းမရှိ) ဘယ်လိုရိုက်ရလဲ ဘာပြောရလဲဆိုတာလဲ မသိဆိုတော့….
-သူငယ်ချင်းကလဲ နယ်ကို သွားဆိုတော့ သူကလဲ မမေးဘူးလေ… ပြန်လာမှ မင်းသုံးလားဆိုတော့ သိဘူးလေလို့ ဖြေလိုက်တယ်…
-ဒါနဲ့ ကျွန်တော့ အကောင့် သူပဲဖွင့်( ပက်စဝေါ့က သူပဲရိုက်ပေးထား အကောင့်လဲ သူပဲဆောက်ပေးထားတော့ ) လူတွေ အက်တယ်ဆိုပြီး ရိုက်ပေးတော့တာပဲ….
-ဒါက ငါ့ကောင်မလေး သူငယ်ချင်း စကားပြောလို့ရတယ်… တဲ့… ဟင်… အဆန်းကြီးပါလား… လူလဲ မမြင်ရပဲနဲ့… စကားပြောရမယ်…
-သိပ်မကြာပါဘူး… မေးလ်တွေ ရောက်လာ … အဲ့ထဲမှာ သတင်းလိုလို၊ သီချင်းတွေ၊ ဆုံးမစာတွေ ပို့လာတယ်… ချက်တင်ခေါ် ဂျီတော့လဲ တွင်ကျယ်လာတယ်…
-ကိုယ်လဲ လျှောက်ရိုက်ရတာ ပျင်းလာတယ်… ပြီးတော့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေလေ… နောက်ဆုံး ဖွန်ကြောင်ရင်တောင် ဒီကောင်က ပြန်ကြားမှာ… စဉ်းစားတယ်… လူအသစ်(ဖရန့်အသစ်)ဘယ်လိုရှာမလဲပေါ့…
-အဲ့မှာ ခုနက ပြောတဲ့ မေးလ်တွေထဲမှာ ဖော်ဝေါ့ မေးလ်တွေ (တဆင့်ခံမေးလ်) တွေထဲမှာ လူအကောင့် နာမည်တွေ တွေ့တွေ့နေတယ်….
-စမ်းပြီး အင်ဗိုက်မယ်ဆိုပြီး စ အင်ဗိုက်တော့တာပဲ… ပြီးတော့ သူတို့လက်ခံတာနဲ့… အရင်က ကိုယ့်ကို မေးတတ်တဲ့ စကားတွေ… Hi.. ASL Plz ဆိုတာတွေ နဲ့ စမ်းတော့တာပဲ… Uni ပြီးပြီလား… အော်… မေ့လို့… မြန်းကလိပ်ကလဲ ဘယ်က ဘယ်လို တတ်မှန်းတောင် မမှတ်မိတော့ဘူး… စရိုက်တုန်းက အင်္ဂလိပ်လို စာစီနေသေးတာ… နောက်တော့ မြန်မာလို ရိုက်လိုရမှန်း သိလာတာရော… သူတို့က မြန်းကလိပ် သုံးတာရော နဲ့ သုံးတတ်မှန်းမသိ သုံးတတ်သွားတာ…
-ဒါနဲ့ ပြီးရောလားဆိုတော့ … ဖော်ဝေါ့ မေးလ်ကဆိုလဲ သူငယ်ချင်းရဲ့ သူငယ်ချင်းပဲ ဆိုတော့ ထပ်စဉ်းစားတယ်… ဖြစ်သေးဘူး… နောက်တနည်းဆိုတဲ့ အချိန်မှာ…
-MIRC ၊ YGN Chat ၊ QQ အဲဒါတွေမှာဆို သိသိမသိသိ လူတွေနဲ့ ပြောလို့ရတယ်… ပထမတော့ Public ပေါ့… နောက် အိုကေရင် Private ပြောကြပေါ့…
-အဲကနေ ခင်ရင် ဂျီမေးလ်တောင်း၊ အင်ဗိုက်၊ ချက် ကြပေါ့… နောက်ဆို ဂျီတော့မှာတော့ အစိမ်းဆို အား၊ အနီဆို အလုပ်ရှုပ်၊ အ၀ါ (idle) ဆို လူမရှိတွေ ဖြစ်လာခဲ့တယ်…
-နောက်ဆို နီကို နီထားရတယ်… မနိုင်တော့ရင် အ၀ါ လူမရှိဘဲ ထားထားတယ်… ကိုယ်နဲ့ အိုကေတဲ့ သူမှ ငါရှိတယ်… တမင်လုပ်ထားတာ ပြော… ဟားဟား…. ပြန်တွေးရင် တကယ်ကို ရီရပါတယ်…
-ပြီးတော့ စီစီတီဗွီတွေ ရောင်းတဲ့ ကုမ္ပဏီကို ရောက် အကောင့် ၁ ခုကနေ ၂ ခု ဖြစ်… ဒါပေမဲ့ သိပ်နပ်မမှန်ပါဘူး သုံးရတာ… အားမှ သုံးရတာလေ… အလုပ်အားတာရယ်… ရှေ့မှာ သုံးတဲ့ သူ တယောက်ထမှ အားတာရယ် နဲ့ဆိုတော့… အဲတုန်းက အင်တာနက်သုံးဖို့ ကွန်ပျူ တာ တမျိုးပဲ ရှိတာကိုး… ခုလို ဖုန်းတွေ မပေါသေးဘူးလေ…
-ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော် အခုလုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကို ရောက်တော့ ရာထူးကလဲ အိုင်တီဆိုတော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ… သုံးတာပေါ့… အဲ့ချိန်ခေတ်စားတာ ဟာသတို့ ထူးထူးဆန်းဆန်းတို့ဆို Meta Cafe ပဲ… သီချင်းအသစ်တွေ နားထောင်ချင်ရင် The Last FM …
-၂၀၀၉ မှာ ကျွန်တော်တို့ ရုံးတွေကို ပေါင်းတဲ့အချိန် အိုင်တီတွေလဲ စုမိ… ပညာတွေဖလှယ်ကြရင်း… ဖေ့ဘွတ်ကို စတင် မြည်းစမ်းမိတာပဲ…
-ထို့အတူ မန္တလေးဂဇက်ကိုပါ စပြီး သိခဲ့တယ်… လိုချင်တာမှန်သမျှ ဂူဂယ်ကနေ ရှာတယ်… ၀က်ဆိုက်လင့်တွေက တဆင့်လိုချင်တာတွေရှာ ဂဇက်မှာ လာတင်ပေါ့…
-ဘာတွေပါ အပိုပါလာလဲဆိုတော့ သူငယ်ချင်းထောင်ထားတဲ့ ဆိုက် ရွှေစကားမှာ အက်ဒမင်ဖြစ်လာတယ်… ချက်ရွန်းတွေ ကိုယ်တိုင်လုပ်ပေးတယ်…
-ning ဘလော့စပေါ့ ဆိုက်တွေ ပေါ်လာတော့ ကိုယ်ပိုင်ဆိုက်ကို ထောင် သီချင်းတွေ တင်… MTV တွေ တင်နဲ့ ပျော်လို့ မဆုံးသေးဘူး… အဲဒါတွေက ပိုက်ဆံပေးမှ ဆက်ပြီး ထောင်ခွင့်ရမယ်ဆိုတော့… စိတ်ဓာတ်ကျ… ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ… အစားထိုးစရာရှာ…
-အဲ့အချိန်ထိ ဖေ့ဘွတ်က ပုံတွေ တင်လို့ရတယ်ပဲ သိတယ်… ဂျီတော့မှာဆို သူငယ်ချင်းဖြစ်မှ ပြောလို့ ရတယ်… ပုံမြင်ရတယ်….ဖေ့ဘွတ်မှာက မလိုဘူး နာမည်ရိုက်လိုက်တာနဲ့ သိချင်တာတွေ သိရတယ်… အဲတုန်းက Security တွေ ဘာတွေ သိပ်နားမလည်ကြသေးတာကိုး…. ဖေ့ဘွတ်က သီချင်းတွေ MTV တွေ တင်လို့ရတာလဲ မသိသေးဘူး…
-နင်(ning)ဆိုက်မရတာနဲ့ မထူးဘူးဆိုပြီးး အဲမှာ စသုံး… ဂဇက်ကိုလဲ ပို့စ်တင်ပေါ့… ဒီလိုနဲ့ ဒီလိုနဲ့… ခုချိန်မှာတော့ မသုံးလို့ မဖြစ်တဲ့ သတင်း Source တခုဖြစ်လာပါတယ်…. ဖုန်းတွေကလဲ ဖောချင်းသောချင်းဖြစ်လာတာကလဲ တကြောင်းပေါ့…
ကျွန်တော် အစမှာ ပြောထားသလိုပေါ့… ယောက္ခထီးက ခယ်မကို အမေးမှာ ကျွန်တော် ဖြေချင်တာက….
” အခုကတော့ အလွယ်ဖွင့်လို့ရ… Source လဲ စုံတာက Facebook ပါ… အဲဒီမှာ သတင်းကြည့်မလား၊ အတင်းကြည့်မလား၊ မဟုတ်တာကြည့်မလား၊ ဟုတ်တာကိုပဲ သိချင်လား ကိုယ်ရွေးချယ်မှု ပါပဲလို့… တခုပဲ သူ့ကို ပိတ်ပင်လို့ မရရင် ကျုံးသွင်းပေါ့(လိုချင်တဲ့ဘက်မှာ ကောင်းတဲ့ဘက်မှာ သူသုံးဖို့ လမ်းညွှန်ပေးပေါ့..) အဲလိုနေရာမှာလဲ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲ ဂဃနဏ သိအောင် အရင်လေ့လာရင် ကောင်းပါတယ်လို့… ပြောပြလိုက်ချင်ပါတယ်… “
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် says: ဂျီမေးလ်ကို ဂူဂယ်လ် က မသိသေးဘူးဆိုလို့
ဂျီမေးလ် က ဂူဂယ်လ် က ပေးထားတဲ့ မေးလ် မဟုတ်ဘူးလားဗျ
Friendster ,Hi5 တို့ကော ကလိခဲ့ဖူးမှာပေါ့နော်
Yae Myae Tha Ninn says: ဟုတ်ဘူးဗျ… ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တောင် ဂျီမေးလ်ပဲ အရင် သုံးနေတာ… ရှာချင်တာတွေ ရှာဖို့ ဂူဂယ်ရှိတာကို မသိတာ…သုံးရကောင်းမှန်းလဲမသိဘူး… နှောင်းလူတွေကျတော့ တခါတည်း တွဲသိကြတယ်လေ… ရှာရင် ဂူဂယ်.. မေးလ်ဆို ဂျီမေးလ်.. ဖရန့်စတားတို့ ဘာတို့ကျတော့ အနည်းအကျဉ်းပဲ သုံးဖြစ်လိုက်တယ်…ဘာလို့ သိပ်မသုံးဖြစ်လဲတောင် မမှတ်မိဘူး… ဖေ့ဘွတ်က တင်လို့ရတာ ပိုစုံတော့ အဲ့ဘက်ကို ယိမ်းသွားလို့ထင်တယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14443
kai says: Gmail ဆိုတာရဲ့.. G က.. Google ရဲ့ G လေ..။
ဒုတ်ခွ..။ စဖွင့်တော့.. တယောက်ယောက်က ဖိတ်ခေါ်မှရတာ…။
Test လုပ်နေတဲ့ကာလ..။ အဓိကအားဖြင့်.. ကွန်ပြူတာဒစ်မလိုမာရပြီးသူတွေ.. ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်မာ..။ ကွန်ပျူတာရုံးဝန်ထမ်းတွေမှပေးတာ..။
ကျုပ်က.. ကံကောင်းပြီး MCSD သမားနဲ့သိသမို့.. သူ့ထောက်ခံချက်နဲ့.. စလုပ်တာ..။
အဲဒီတုံးက နာမယ်ကောင်းတွေအကုန် တယောက်ထဲ.. ယူပလိုက်တာပဲ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1327
Yae Myae Tha Ninn says: အဲတုန်းက အဲလိုသုံးရကောင်းမှန်းကို မသိတာ တဂျီးရ… တုံးတယ်ပြောလဲ ခံရတော့မယ်… ဂျီမေးလ်အကောင့်ကတော့ ကျွန်တော်က စစလုပ်ချင်းကို မမှီလိုက်တာ ထင်တယ်… ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ အချိန်မှာ တခြား မေးလ်လိပ်စာ တခုရှိရင်ပဲ လက်ခံပြီဆိုတော့ sailormoon အကောင့်ထည့်လိုက်တာ အိုကေတယ်… ဒါလဲ သူငယ်ချင်းလုပ်ပေးတာပါ… နာမည်ကောင်းတွေ ယူတာကတော့ ဟုတ်တယ်ဗျာ… ကျွန်တော်ဆို တကယ်သုံးတော့သာ ၂ ကောင့်ပါ… နာမည်ကောင်းတွေက ၁၀ ကောင့်လောက်ရှိတယ်… အဲတုန်းက လုပ်တဲ့ အကောင့်တွေ အခုထိ Inactive ဖြစ်နေလဲ မဖျက်သိမ်းဘူး… Was this answer helpful?LikeDislike 12385
ခင်ဇော် says: ၂၀၀၆ လောက်မှ ပဲ
ဂျီမေးလ် နဲ့ ဖရန့်စတာ စသုံးဖူးတယ်..
၂၀၀၈ မှာ ဖေ့ဘုတ်ဖွင့်ဖြစ်တယ်..
ကိုယ် က တော့ မမြင်ရတာတွေ လက်လှမ်းမမှီတဲ့ နည်းပညာတွေ ကြောက်တတ်တာမို့
ကိုယ့် အကောင့် တွေ မထိခိုက်ရေးး အွန်လိုင်းကနေ ကိုယ့် ပရိုက်ဗေစီ မထိခိုက်ရေး ဥစားးပေးးး နေခဲ့ တာ…
အဲဒီတုန်း က သုံးရတာ ပို ငြိမ်းချမ်းတယ်နော်..
Yae Myae Tha Ninn says: ဒါဆို ဖေ့ဘွတ်က အနော့်ထက် စောသုံးဖူးတာပေါ့… ဇီဇီက… ကိုယ်ကလဲ သွားမဖောင်းဘူး… ဆိုရင်တော့ အေးဆေးပါ… ဘယ်သူမှလဲ စိတ်ဝင်တစားနဲ့ လာပြီး ကိုယ့်ကို မထိခိုက်လောက်ပါဘူး… ဟီးးး အထင်ပြောတာပါ… အနော်က မထင်မရှားလေးကိုး… အမှန်ပြောရရင်တော့ အဲတုန်းက အွန်လိုင်းက သုံးရတာ အရမ်းကောင်းပြီး လူသန့်တယ်… ကွန်ပျူတာ နဲ့ သုံးရတာတို့ ဆိုင်မှာ အချိန်ပေးသုံးရတာတို့ ဆိုတာ ကျောင်းသားတို့ ဒါမှမဟုတ် ဂိမ်းသမား ဆွေမျိုးတွေက နိုင်ငံခြားမှာတို့ ဒါတွေပဲဆိုတော့ တအားလဲ မမိုက်ရိုင်းကြဘူး… ကြော်ငြာတွေလဲ အရမ်းမများဘူး… ပြောတတ်တော့ဘူး… အဲအချိန်တုန်းက လူသန့်တာတော့ အမှန်ပဲ… ဇီဇီ စကားနဲ့ဆို ငြိမ်းချမ်းတယ်ပေါ့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12139
Thint Aye Yeik says: ကျနော်ကျတော့… ၂၀၁၀ လောက်မှ… အင်တာနက်ကို စသိတာ…။
စ သိတော့…Gmail , Gtalk နဲ့ Google ပေါ့…
Yae Myae Tha Ninn says: ဒါဆို အလင်းစက်က တော်တာပေါ့… ၆ နှစ်လောက်နဲ့ ကိုယ်တွေထက် အွန်လိုင်းကို မွှေနိုင်တာ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 154
ပျင်းတကာ့ ထိပ်ခေါင်တင် says: မှတ်မှတ်ရရ gmail စသုံးတုန်းက ဝင်သမျှ မေးလ်တွေကို အကောင့်ထဲရှိသမျှ friend တွေအကုန်forward လုပ်တယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1327
Yae Myae Tha Ninn says: ဒါဆိုလဲ ဆရာကြီးက သဘောပေါက်လွယ်တာပေါ့… ကျွန်တော်ဆို တော်တော်ကြာတဲ့ အထိ မသိသေးဘူး… အကုန် ကျွန်တော့ထက် ဥာဏ်ကောင်းတဲ့ သူတွေချည်းပဲ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 154
ပျင်းတကာ့ ထိပ်ခေါင်တင် says: ငွင် စွတ်အထင်မကြီးပါနဲ့ ကိုယ့်ဆြာရယ်
အဲလို ပေါတောတော ကြောင်တောင်တောင် သူများအနှောင့်အယှက် ဖြစ်လောက်တာတွေ လုပ်ဖူးတယ် ပြောချင်တာပါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1327
Yae Myae Tha Ninn says: ဘာပဲပြောပြော သုံးရကောင်းမှန်း သိတာကိုက တပန်းသာပါတယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 110
Tawwin Pan says: 2006 လောက်ကစသုံးဖူးတယ်။ အရင် Sailrmoon တို့ Wailla (စာလုံးပေါင်းမမှတ်မိ) တို့ အရင်စသုံးဖူးတယ်။
ဂျီမေလ်းက သူများကတဆင့်ဖွင့်ပေးမှရတာဆိုတော့ အင်တာနက်ဆိုင်ကိုသွား ဆိုင်က ဝန်ထမ်းအကိုကြီးကို အပီကပ်ပြီး အကောင့်ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရလဲမေးတာ…သူပဲလုပ်ပေးမယ်ဆိုတာကို လက်မခံဘဲ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဖွင့်တတ်ချင်လို့ဆိုပြီး အပူကပ်ရတာပေ့ါ……..
သူက အကောင့်သစ်ဖွင့်ဖို့အတွက် Invite လုပ်နည်းတွေ ဖွင့်နည်းတွေပြောပြ……
ပထမဆုံးကိုယ့်အကောင့်ကို သူကနေ Invite လုပ်ပေးပြီးဖွင့်လိုက်တယ်။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ကျတော့ ကိုယ်ကပဲ Invite လုပ်ပြီး ထပ်ဖွင့်ပေးပေ့ါ။ အခုသုံးနေတဲ့ အကောင့်က အဲဒီထဲကစသုံးတာ….အကောင့်တွေ အများကြီးပြိုင်ဖွင့်ပြီးလည်း သုံးဖူးတယ်။
ပြီးမှ YGN Chat ကိုစသုံးတာ….Multiply သုံးတယ်။ Hi5 တို့ပေါ်လာတော့ Multiply နဲ့ဆင်တူဆိုတော့ မသုံးဖြစ်တော့ဘူး။ ဖေ့ဘုတ်ပေါ်လာတော့ Multiply လိုမျိုးပဲဆိုတော့လည်း မသုံးဖြစ်ပြန်ဘူး။ နောက်မှ ဖေ့ဘုတ်က အရမ်းခေတ်စားလာတော့ ကိုယ်ကလည်း စာသင်နေရတဲ့သူဆိုတော့ ဖေ့ဘုတ်သုံးနည်း မသိလို့ မဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီး စသုံးလိုက်တာ.ဒါပေမယ့် ဖေ့ဘုတ်ကို အခုထိ သေချာမကလိဖြစ်ပါဘူး။ ပျင်းနေရင် သူများတင်ထားတာတွေပဲ ဝင်ကြည့်ဖြစ်တော့တာ…
Yae Myae Tha Ninn says: ဒါဆို ဂဇက်ထဲကလူတွေ တော်တော်များများက အင်တာနက်ပေါ်ကတည်းက ရင်းနှီးကြတဲ့ သူတွေချည်းပေါ့… ဖေ့ဘွတ်ကတော့ သုံးတတ်ရင် မိုက်ပါတယ်… အခုဆို ဆရာရစ်ချတ်က အွန်လိုင်းကနေ IELTS ကို သင်တန်းပေးနေတယ်.. ဂွတ်တယ်ဗျ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1294
uncle gyi says: အူတူတူအတတတွေမသုံးသင့်လို့သတိပေးထားသင့်တယ်
Yae Myae Tha Ninn says: ဒါကျတော့ တယောက်ချင်းစီရဲ့ သိမှု စွမ်းအင် နဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရားပေါ်မူတည်မယ်ဗျ… ဟုတ်သလား မဟုတ်လား ဆိုတာ… အခုက ဖုန်းလေး ကိုင်နိုင်လိုက်တာနဲ့ ဖေ့ဘွတ်အကောင့်လဲ ဖွင့် သုံး လိုက်ခ် မန့်နေကြတာ… ကလေးအစ ခွေးအဆုံးဆိုတော့… ခက်ပါတယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .အင်တာနက်ကိုအသာထားလို့ ကွန်ပြူတာတောင် ၂၀၀၉နှောင်းပိုင်းမှ အိမ်မှာလူခေါ်သင်ရတယ်…
.လျှောက်တဲ့အလုပ်က ကွန်ပြူတာတတ်မှဆိုလို့ ( အခုအလုပ်ပေါ့ )
.၂၀၁၀ နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာ အင်တာနက်တို့၊ အီးမေးတို့၊ ဂျီမေးတို့ စသင်ရင်းသုံးတာပေါ့…
.၂၀၁၁ လောက်မှ မန်းလေးဂဇက်ကိုစရောက်ပါတယ်….ခုတော့ဝင်နိုင်တဲ့အခါဝင်ပေါ့…
.အော်…ဒါတောင်မသိသေးတာတွေအများချည်းကျန်နေသေး… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1327
Yae Myae Tha Ninn says: မသိတာတော့ ဦးကြီးမိုက်ရေ ကျွန်တော်တို့လဲ အများကြီးရှိတယ်… တခါတခါ End User တွေက ပိုတောင် သုံးတတ်သေး… လာအားပေးလို့ ကျေးဇူးပါ… နေကောင်းသွားပြီပေါ့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 236
Foolish Girl says: ခုခေတ်ကလေးတွေက gmail ဆိုတာတောင်ကောင်းကောင်းမသိဘူး gtalk ခေတ်ကကုန်ပြီဆိုတော့လေ
ညီမလေး ရဲ့ facebook account lock ကျသွားလို့ နင့်gmail pေassword ပေးဆိုတော့ facebook Password ရဲ့ ကို လာပေးတယ်
facebook account ဖွင့်ဖို့ gmail account အရင်ဖွင့်ရတာ ဘာညာပေါ့ ရှင်းပြရတယ်…
ဒါပေမယ့် ကိုယ်တွေသူတို့အရွယ်တုန်းက အင်တာနက်ဆိုတာဂျိုနဲ့လားလို့ထင်နေတာလေ….